1. साल्मन सायद सबैभन्दा तयार-गर्न-प्रयोग कम्पोनेन्ट हो। ताजा सामन फिललेट त्यहाँ एउटा फ्रिज छ र रातको खानाको लागि। वा स्वादिष्ट खाजा सजिलैसँग र साथै बर्तनका एक किसिमको खाना पकाउन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ आउनुहोस् हामी कसरी सजिलो सामन, गृहिणी वा शुरुवाती शेफ बनाउँदछौं। यो आराम संग गर्न सक्नुहुन्छ
2. कसरी गर्नु अघि सजिलै तयारी गर्न
3. सबै भन्दा पहिले, उपकरण तयार हुनु पर्छ। क्रमशः ठूलो साल्मन फिललेटहरू प्रबन्ध गर्नका लागि तपाईं स्प्याटुला किन्न तयार हुनुपर्दछ जुन सामान्य भन्दा अलि ठुलो छ। यसलाई जति ठूलो पाउन सक्नुहुन्छ, लिनुहोस्। यसलाई कसरी छनौट गर्ने, कल्पना गर्नुहोस् यो एक spatula हुनु पर्छ कि प्यानमा मासु को सबै भन्दा माथि उठाउन र बारी गर्न सक्नुहुन्छ। र माछा फिललेटहरू स्कूप वा सुन्दर ढ prepared्गले तयार पट्टिको स्थान्तरण गर्न सकिन्छ। वा यति राम्रो छ भने फिश फिललेटहरू समात्नको लागि स्प्याटुला खरीद गर्दै विशेष गरी यो उद्देश्यका लागि डिजाइन गरिएको, यो वास्तवमै धेरै राम्रो विकल्प हो।
4. पछि, मैले कसाई गर्नको लागि उपयुक्त "फलामको प्यान" खोज्यो। त्यसोभए ओभनमा राख्नुहोस् क्वालिटी कुनै पनि स्टिक प्यान पनि मान्य हुँदैन। तातो भट्टीमा जान सक्ने एउटालाई हेर्नुहोस्। र अर्को राम्रो विकल्प एक प्रबलित प्लेटको साथ फ्राई। प्यान हो। प्यानको फलाम नक्कलिएको, झुकेको नभएको निश्चित गर्नुहोस्। ओभनमा उच्च तातो हुँदा सम्पर्कमा पर्दा र लहराती प्रकार (चित्रमा) पनि ग्रिलिंगका लागि उपयुक्त छ।
5. त्यो अर्को अपरिहार्य हो। सानो सुई नाक पिलका (त्यो चिमटी जस्तो देखिन्छ) माछाको पिन हड्डी बाहिर तान्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। सहि आकार, टिकाऊ छनौट गर्नुहोस्, गुण उत्तम हुनुपर्दछ। किनकि साल्मनको पिन हड्डीहरू धेरै शक्तिशाली छन् र हड्डी बाहिर तान्न सफा हुनुपर्छ सुन्दर बनावट पनि प्राप्त गर्न
6. अन्तिम कुरा चर्मपत्र कागज वा एल्युमिनियम पन्नी तयार गर्नु हो। हामी ओभन (फिश एन प्यापिलोट) मा राख्नेछौं र माछा पट्टी ग्रिल प्यानको लागि माछाको फिललेटहरूको लागि प्रयोग गर्न।
7. पनबोन सामन को हटाउने।
8. बोर्डमा सालमन फिल्टहरू राख्नुहोस्। ठूलो काट्ने बोर्ड वा तपाईं यसलाई पन्नीमा भान्छाको काउन्टरमा राख्न सक्नुहुन्छ। लेआउट हो छाला अनुहार तल राख्नुहोस्। (छाला बिना पनि) र सानो हात फैलाउने हड्डी छुनको लागि तपाईंको हात प्रयोग गर्नुहोस् जहाँ यो छ। र त्यसपछि यो मासुको बाक्लो अन्तमा सुरू हुन्छ हड्डीको अन्तिम भागलाई दृढतापूर्वक समात्न र यसलाई बाहिर निकाल्न सुई-नाक पिलरहरू प्रयोग गरेर।
9. स्टोलोटपमा सामन पकाउने सबैभन्दा सजिलो तरीका हो। यदि तपाईंसँग वा ओभन प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न भने खाना पकाउने प्रक्रियाको लागि, यसमा SAUTEING र पोखनिंग समावेश छ।
10. साउटि SA्ग साटाइé्ग साल्मन, छिटो त्राई माछालाई केवल 1-2 पटक उच्च गर्मी प्रयोग गरेर मोडेर। यो विधि खाना पकाउन सजिलो र छिटो छ। यो गर्ने तरिका निम्नानुसार छ
11. मध्यम तताई मा एक सासप्यान मा १ चम्मच माखन पिघला। माखन पतनको लागि प्रतिक्षा गर्नुहोस् र अँध्यारो सुनौलो कुल, करीव minutes मिनट।
12. प्यानमा नुन र कालो मिर्च छर्नुहोस्, minutes मिनेट प्रतीक्षा गर्नुहोस् जब सम्म माछा गुलाबी खैरो हुन जान्छ। त्यसपछि माछालाई टर्न गर्नुहोस् प्यानमा छोडियो (माछा पछाडि र फिर्ता नगर्नुहोस्) स्वाद पकाए सम्म कुर्नुहोस्, अर्को २ देखि minutes मिनेट।
13. पोचिंग एक उमालेको सालमन हो जसले तपाईंलाई पूर्ण रूपमा पकाएको र सुन्दर रंग दिन्छ। यो बिना उत्तम वसाको माछा पकाउने उत्तम तरिका हो। आधारभूत विधिहरू निम्नानुसार छन्।
14. प्यानमा माछाको फिललेटहरू राख्नुहोस्। त्यसपछि प्यानमा पानी थप्नुहोस् फिश फिललेटलाई कभर गर्नको लागि अर्को, केहि नुन, काली मिर्च र तेज पात (अलैंची) छर्कने।
15. हल्का र चाँडो तताउनुहोस्, त्यसपछि तातो बन्द गर्नुहोस्, प्यान छोप्नुहोस् र माछा पकाउन दिनुहोस्। यसले करीव २०- minutes० मिनेट लिन सक्दछ। * यस अवस्थामा, चयन गरिएको सामन मध्यमदेखि ठुलो हुनुपर्दछ।